အပူဖြန်းလှည့်ပစ်မှတ်၏ microstructure သည်ကိတ်မုန့်ကဲ့သို့အပြားလိုက်သောအစေ့များဖြစ်သည်, ကောက်နှံတိမ်းညွှတ်မှုသည်လည်ပတ်ဝင်ရိုး၏ ဦး တည်ချက်နှင့်အပြိုင်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်း၌မိုက်ခရိုအဆင့်ချွေးပေါက်များစွာရှိသည်။, ခြုံကြည့်လျှင် ၅-၂၀%အထိမြင့်သည်။, ပက်ဖြန်းခြင်းနည်းလမ်းနှင့်ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းနှုန်းကိုအသုံးပြုသည်။ ချွေးပေါက်များသည်ပစ်မှတ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းတွင်ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်, ထို့ကြောင့်အောက်ဆီဂျင်စုပ်ယူခြင်းနှင့်စုပ်ယူခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်, အပူဖြန်းခြင်းပစ်မှတ်သည် sputtering မပြုမီမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိစုပ်ယူထားသောဓာတ်ငွေ့ကိုဖယ်ရှားရန်သီးခြားခွဲကျောထောက်နောက်ခံပိုက်ကိုသုံးရပါမည်။.
အပူဖြန်းခြင်းသည်ချောင်း၏အပေါ်ယံပိုင်းသုံးပစ္စည်းများကိုသုံးနိုင်သည်, ဝိုင်ယာများနှင့်အမှုန်များ, အရည်ပျော်ခြင်းမပြုမီအငွေ့ပျံလိမ့်မည်, ထို့ကြောင့်အပူဖြန်းပစ်ခြင်းနည်းပညာသည်သတ္တုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများအတွက်သင့်တော်သည်, alloys and ceramics..Fusion casting ပစ်မှတ်နည်းပညာသည်သတ္ထုသို့မဟုတ်သတ္တုစပ်ပစ္စည်းများအရည်ပျော်မှတ်သည်သွန်းစက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်. ကြွပ်ကြွပ်ကြွေထည်များသည်ပုံသွင်းရန်မသင့်တော်ပါ. အရည်ပျော်မှတ်ကအရမ်းမြင့်နေရင်, အထူးသွန်းလုပ်သည့်ပစ္စည်းများလိုအပ်သည်။ အချို့သောကြွေထည်ပစ္စည်းများသည်အရည်ပျော်မှတ်သို့မရောက်မီအရည်ပျော် (သို့) ပြိုကွဲသွားလိမ့်မည်.
လှည့်နေသောအပူဖြန်းပစ်ခြင်းသည်အပေါ်ယံမှပစ္စည်းကို liner ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ဖြန်းရန်ဖြစ်သည်, နောက်ထပ်အနှောင်အဖွဲ့မရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်။ ဤသည်အရည်ပျော်မှတ်နိမ့်သတ္တုများကိုတိုက်ရိုက်သွန်းလုပ်ခြင်းနှင့်အတူတူပင် (အရည်ပျော်မှတ် ၄၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်နည်းသည်) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊, အချို့ “ပျော့ပျောင်းသည်” အရည်ပျော်မှတ်မြင့်သောသတ္တုများ, Ag ကဲ့သို့, သီးခြားချည်နှောင်ရမည်.